उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि झलनाथ खनालले ओलीलाई पठाए मनछुने सन्देशNepalpana - Nepal's Digital Online
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई थप उपचारका लागि भारत लगिने भएको छ । थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका नेता खनालको थप उपचारका लागि भारतको नयाँदिल्लीस्थित एपोलो अस्पताल लान लागिएको हो ।
उनका स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराईले आज दिउँसो उपचारका लागि नयाँ दिल्ली लैजान थालेको जानकारी दिए । नर्भिक अस्पतालका कर्पोरेट कम्युनिकेशन प्रमुख सोमनाथ बाँस्तोताले पहिलेदेखि नै उनलाई एपोलोमा देखाइरहेकाले पारिवारिक र चिकित्सकको सल्लाहमा थप उपचारका लागि लान लागिएको बताए ।
दिल्ली जानुअघि झलनाथले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सन्देश पठाएका छन् । झलनाथको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेललाई पठाएका थिए ।
भेटमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनाले महासचिव पोखरेलमार्फत ओलीलाई ‘तपाईंले पार्टी मिलाउनुस् कमरेड’ भनेर सन्देश पठाएका हुन् ।
शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै महासचिव पोखरेलले ‘तपाईं छिट्टै निको भएर आउनुस् अनि सल्लाह गरौं!’ भनेका थिए ।
'कसैकाे हित हुँदैन' भन्दै संसदीय दलको बैठकमा झलनाथ खनाल आगो !
झलनाथ खनालसहितका नेताले बुझाए स्पष्टीकरण !
झलनाथ खनाललाई कोरोना संक्रमण, अस्पताल भर्ना भए !
नेपाल, खनाल र गौतमबीच नयाँ दल खोल्न सहमति, पार्टीकाे नामसमेत तोकियो !
आषाढ २, २०७८ बुधवार १३:५४:२७ बजे : प्रकाशित